Kasibili yonke amabhizinisi amancane kanye naphakathi aphoqelelwe ukuba abe imishini yokukopisha jikelele. Kufanele bakwazi ukunyathelisa umbhalo ephepheni, ukukopisha imibhalo bese uthumela ngefeksi. Konke lokhu kungenxa Sibonga kungenzeka ukuba amadivayisi njenge MFPs lwesikhundla (idivayisi multifunction). Thenga imishini enjalo lungaphezu inzuzo engaphezu kuka-ukuthenga imishini yokukopisha, iphrinta futhi isithwebuli ngamunye. Okokuqala, woza eqolo, kanti okwesibili, kuzothatha isikhala esikhulu.
Ukukhetha MFP lwesikhundla - akuwona neze umsebenzi olula. Phela, nomkhiqizi ngamunye incoma ngokwayo nezinkampani nokukhangisa. Ukuze umuntu akaqondi lokhu, baphendukela bonke ezindleleni okufanayo. Kodwa eqinisweni akusiyo. Ngisho MFP lwesikhundla yakho encane akulula kangako ukukhetha.
Kwimakethe kukhona kumadivayisi amaningi eziphansi ezifana nezinkampani owaziwa njengo Mfowethu, Samsung, HP, Xerox, njll Kubantu abaningi, umbandela eyinhloko Nguwena izindleko zedivayisi. Futhi iphutha elikhulu. Phela, izinhlangano eziningi bathenga ekhaya Imishini, njengoba MFP lwesikhundla, babhekana nezinkinga olwengeziwe. Phela, lo mshini asakhelwanga ukuphrinta esiningi umbhalo. Ngakho-ke, ngemva esifushane, izindleko ezengeziwe for okudlekayo, kanye ukulungiswa ebizayo izingxenye ezihlukahlukene.
Ukuze wenze into silly ezinjalo, uma ukhetha Office MFP okucasulayo ngokuyinhloko oyifunayo usayizi ukuphrinta. Futhi kungakhathaliseki ukuthi is ebalulwe imiyalo ku-MFP, futhi ngalokho ohlela ukukwenza nabo.
Kuvele umbandela okubalulekile futhi izindleko okudlekayo ezifana inki cartridges, izingxenye ezidingekayo futhi ukulungisa. Uma ukhetha i-ofisi MFPs ezingeke dengwane. Uma uhlela ukuqhuba refilling ukubhala cartridges, kuyoba kakhulu ukulondoloza isabelomali inkampani.
Manje ake sixoxe onobuhle ezithile. Uma udinga iphrinta, isithwebuli, ngefeksi kanye imishini yokukopisha, futhi umthamo mikhondo ingeqi Amakhasi ayizinkulungwane ezingamashumi amabili ngenyanga, khona-ke kuyoba okungcono ukhetho lokuthenga Samsung MFP 4824. Isekela ukuphrinta okusheshayo, has a isitoreji ugqoko sasivumela evulekile ukuze sithole iphepha, kanye ugqoko engenhla ngenxa yokukopisha noma kuthwetshulwa izimo eziningi kanyekanye.
Uma ufuna uzitholele amashidi ezingaphezu kuka amabini anamahlanu amawaka, bese sibheka yakho kuya MFP Samsung 4833. It yakhelwe ngokunyathelisa out ngamashumi amane amawaka, amashidi ngenyanga.
Yiqiniso, wabasekeli yaleli su njengoba Canon noma HP bangathi le mikhiqizo zinokwethenjelwa okuningi futhi engcono Samsung, kodwa ungakhohlwa mayelana izindleko imishini enjalo. Phela, Canon efanayo ne-HP ibe nenani okweqa dollar ayinkulungwane. Yini enye eningayenza ukubona ngakho kuba umakhi Xerox amadivaysi. Kodwa inkampani isebenzisa izingxenye efanayo Samsung. Ngakho-ke, lezi amadivaysi cishe ezifanayo naphezu ukubukeka ezahlukene.
Ukuze zonke namanye amadivayisi, abazi kufanele siyinake incwadi, ngoba abakwazi ukuhlangabezana zonke imibuzo ezidingekayo, kanye nezindleko ngokungadingekile ngabo kuyoba unomphela.
Indlela ukufometha flash idrayivu NTFS Windows amathuluzi?
Manipulator "igundane" - i kwidivaysi yokufakwayo. Ikhompyutha igundane nezinhlobo zabo
Indlela yokulungisa drive flash ekhaya?
Indlela overclock Intel Core 2 Duo: semfundo
Imithi Islamic kubantu besifazane kanye amadoda. Helba: ukwelapha izifo 100
Vitamin E amaphilisi kanjani ukuthatha. Vitamin E amaphilisi: Indlela yokukala umuthi. Ukufundiswa izindleko
Uju kwandisa noma kunciphisa ingcindezi? izakhiwo ezisebenzisekayo Izimo
Ukukhwehlela imithi "Ambroxol": yokusetshenziswa
Amaqiniso ethakazelisayo umzwilili izingane
Medicine "Duphalac" - yokusetshenziswa
Ukupheka inyama ye-meatball ku-sauce ekhanda
Area of ingcindezi ongaphakeme emkhathini - Iyini? Kanjani futhi kwakhiwa iphi ngumuntu ingcindezi endaweni ongaphakeme?
Ulimi kanye inkulumo - izigaba ngokolimi eyisisekelo
Isigaba Luteal - kuyini?